အှနျလိုငျး ပျေါ မှာ သိနျးထောငျ ခြီတနျတဲ့ စိနျတှေ ရှတှေေ 𝗟𝗜𝗩𝗘 လှငျ့ပွီး ရောငျးတဲ့ ဝယျတဲ့ ကိစ်စ အောငျသမာဓိ ပိုငျရှငျပွောပွီ – Shwe Naung
အှနျလိုငျး ပျေါ မှာ သိနျးထောငျ ခြီတနျတဲ့ စိနျတှေ ရှတှေေ 𝗟𝗜𝗩𝗘 လှငျ့ပွီး ရောငျးတဲ့ ဝယျတဲ့ ကိစ်စ အောငျသမာဓိ ပိုငျရှငျပွောပွီ
Shwe Thuta | November 3, 2020 | Knowledge | No Comments
စိနျ လိုကျ ရှေ လိုကျေ တှ အကွောငျး..
ဦးအောငျ မင်ျဂလာ ပါဗြ.. မင်ျဂလာပါ.. မေးစရာလေး ရှိလို့ပါ.. အေးမေးပါဗြာ..
ခုတလော Live လှငျ့ပီး စိနျတှရှေေေ တှရောငျးေ နကွတဲ့ ကိစ်စေ လးမေးခငျြလို့ပါ.. မေးပါ ဘာသိ ခငျြတာလညျး..ဦးအောငျ တို့အော ငျသမာဓိ ကရော Live လှငျ့ပီးရောငျးေ သးလား?? ရောငျးပါတယျ.. ဒီလိုရော ငျးတော့ Live ရော ငျးနတေုနျး ဝယျရငျဈေးေ လြှာ့ပေး တာေ တှရှိ လားဗြ.. မရှိခဲ့ပါဘူး..ဒါပမေဲ့တ ခုတော့ ရှိတယျ Live ရောငျးနေ ခြိနျမှာဒီဇို ငျးအောကျေ နတဲ့ေ ရှထညျ (၅၀)လော ကျကိုတော့..အရော့လ က်ခတှေ မယူတော့ဘဲ..ရှဘေိုးနဲ့ဘဲရောငျးပေး တာရှိခဲ့ပါတယျ..
ဘာလို့အဲ လိုရောငျးနိုငျတာ ပါလဲ?? ဒီဇိုငျးအော ကျနတေော့ မဟုတျလ ညျးဖကျြ ရငျကိုယျလ ညျးဘာမှမ ရတော့ ဘူးလေ..ကွိုကျလို့ဝယျ တဲ့သူကွတော့..သကျ သာသှားတာပေါ့.. အဲဒီဖကျြမဲ့အ ထညျ ရဲ့ရှအေရ ညျသှေးေ တှကရောေ ကာငျရဲ့လားဗြ.ပွနျ ဝယျပေးရငျေ ရာဈေးတူဝ ယျပေးရဲ့လာ?..ကောငျးပါတယျေ ဈးတူဝယျေ ပးပါတယျ..ဆိုငျမှာက (၁၅ပဲနဲ့ ၁၆ပဲ) ရှရေညျကော ငျးနှဈမြိုး ဘဲထားေ ရာငျးေ တာ့.. ပွနျရောငျးလညျး ဘာမှရှုံးစရာမ ရှိတော့ဘူးပေါ့.. ရှဈေေး တကျရငျမွ တျတောငျမွတျအုံးမှာပါ..
အောငျသမာဓိက ဘာကွောငျ့ ရှတှေစေိနျတှေေ လြှာ့ဈေးမရောငျး ရတာလညျး?? ကိုယျပိုငျစိနျတှငျးေ ရှတှငျးမရှိလို့ပါ.. ရှငျးပွပါအုနျးဗြ.. လြှော့ရအောငျ ကိုယျတှငျးကထှကျလို့.. အလကားရရငျေ တာ့လြှော့ပေးလို့ရမှာပေါ့.. ဒီလိုမှမဟုတျဘဲေ လြှာ့တယျဆိုရငျတော့.. တခုခုမှားနလေို့ပါ.. ရှဆေိုငျစိနျဆိုငျေ တှဟာဘယျသူမှတှငျး မရှိကွလတေော့.. လိုအပျလာရငျဈေး ကှကျမှာဘဲပွနျဝယျရပါတယျ.. ရှနေဲ့စိနျဈေး ကှကျမှာတော့ေ လြှာ့ဈေးနဲ့ရောငျးတယျဆို တာမကွားဘူးပါဘူး.. ဒီလိုဆိုရငျေ လြှာ့ရောငျးနကွေ တာဘာ့ကွောငျ့ ပါလညျး.. ဒါတော့ရောငျး တဲ့သူတှေ ဘဲမေးကွညျ့ပေါ့..
Live မှာဝယျရငျ တဈဝကျလြှော့.. ဆဈရငျဆဈ သလိုရနကွေတယျတဈကယျေ ရာဟုတျရဲ့လာ?? ဆဈလို့ရနတေယျဆို တာစိနျထညျတှေ မြားပါတယျ.. မြားသောအာွး ဖငျ့ဈေးဝယျတှဟောစိနျနား မလညျတဲ့ သူမြားတော့.. မူလတနျဘိုးဘ ယျလောကျတနျလို့ ဘယျလောကျလြှော့ေ ပးတယျဆို တာ ဈေးဝယျသူနားမ လညျတာခကျေ နတာပါ.. ဥပမာသိနျး (၁၀၀)တဈရာတ နျကို တဝကျလြှော့သိနျ (၅၀)နဲ့ရောငျးတယျပေါ့.. အဲဒီပစ်စညျးကိုသူမြား သှားရောငျးရငျ(သို့) သူ့ဆိုငျ ကသိနျး (၁၀၀)နဲ့ပွနျဝယျပေးရငျတော့ သိနျး (၅၀) တကယျမွတျရငျေ တာ့အဟုတျပေါ့.. ဒီလိုမဟု တျဘဲနဲ့… ပွနျရောငျးရငျသိနျး (၅၀)အော ကျလြှော့ရရငျတော့.. ခံရပီပေါ့.,
Live မှာစိနျထညျေ တှသိနျးထောငျခြီဝ ယျနကွေတယျဆို တာဟုတျပါ သလား?? အောငျသမာဓိ Live မှာရော စိနျထညျပစှညျးတမြိုး ထညျးသိနျးေ ပါငျး(၃/၄/၅)ထောငျးရောငျရဘူးလားဗြ?? မရောငျးရဘူး ပါဘူး..သိနတေဲ့မိတျေ ဆှရငျတှကေဆို ငျမှာသူရော ကျစဉျကမွငျဘူး ပီးသားပစ်စညျး ကိုပွနျဝယျ သှားတာ.. သိနျနှဈရာဘိုးဘဲ တခုတော့ ရောငျး ဘူးပါတယျ.,.
ဒီလိုဆို ရငျမငျး သမီးတှနေဲ့ Live မှာ ရောငျးနရေတဲ့ စိနျထညျးပစ်စ ညျးတှေ သိနျ(၄/၅)ထော ငျးရောငျးရတာ အမှနျရောဖွဈပါမလား??
ဒါတော့ရော ငျးပေးတဲ့မ ငျးသမီးဝယျသူတှနေဲ့ဆိုငျရှငျတှေ ဘဲအတိအကြ သိကွမှာပါ…
ဦးအော ငျရဲ့အမွငျလေွးေ ပာပါအုနျး..တကယျခမျြးသာပွီး တကယျဝယျနို ငျသူဘယျသူ မဆိုပေါ့..မွေ၊ကား၊စိနျ၊ေ တှကိုကိုယျတိုငျမမွငျ ရဘဲ..လကျတှမေ့ကွညျ့ ရမမွငျရဘဲဝ ယျတယျဆိုတဲ့လူမ ရှိသလော ကျရှားပါတယျ.. ရှိရငျတော့အေ တျာထူးတာပါဘဲ..
Live မှာ ဝယျတဲ့ ပစ်စညျးတှဟော စိတျမခရြ ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား??
ဒီလိုတော့ မဟုတျပါဘူး.. စိနျကြောကျရဲ့အရညျ အသှေး ကဘာလညျး.. ရှဘေယျလော ကျသားပါလညျး.. အရညျသှေးစဈ ထားတဲ့စာရှကျပါ ရဲ့လား.. ပွနျရောငျးရငျ ဘယျလိုပွနျဝယျပေး မှာလညျး.. ဒါတှသေိ ပီးရငျနားလညျး သူကိုရောတိုငျပငျ ပွီးပီလား?? ဒါတှပွေညျ့စုံရငျဝယျ လို့ရပါတယျ…,
အောငျသမာဓိမှာ Live မှာဘယျလောကျထိ အမြားဆုံးရော ငျရဘူးလညျး?? မရောငျရပါဘူး.. Live မှာပွတဲ့ပစ်စညျးတှကေေ ကျွာငွာတဲ့သေ ဘာပါဘဲ.. ကွညျ့တဲ့သူတှကေ ကွိုကျရငျဆကျ သှယျလာကွမှ.. ဝနျထမျးေ တှနဲ့ဗိုကျဘာကနထေပျပွ အသေးစိတျပွနျကွညျ့ပီးမှ ရောငျးရတာပါ.,
ဒီလို Live. မှာသိနျးထောငျခြီေ ရာငျးနရေတာတှကေို အခှနျဘယျလိုေ ဆာငျကွပါသလညျး.. ဒါကေ တာ့အခှနျဝနျထ မျးဝယျဆိုတဲ့ သူတှနေဲ့ ဆိုငျရှငျတှမေေးကွညျ့ပေါ့..
အောငျသမာဓီရှေ ဆိုငျကရောအခှနျတှေ ဘယျလိုဆောငျ ပါသလဲ.. ဆိုငျခှဲ(၄/၅)ဆို ငျဘဲရှိပမေဲ့ အထကျမွနျမာပွညျ မှာတော့ အမြားဆုံးဆောငျနိုငျလို့ (ပထမ) ဆုရထားပါတယျ..
ဘာမြာွး ဖညျ့စှကျွေ ပာခငျြပါသေးလညျး.??
စိနျတှရှေတှေအေကွောငျးနားမလညျဘဲ.. လြှော့ဈေးမကျနရေငျတော့ ငါးမြှားခြိတျဟတျမိတဲ့ငါးလို ဖွဈတတျပါတယျ..
မှတျခကျြ= “လူအ မကုနျ၊ လူကုနျ မအ” စာတဈလုံးရဲ့ ကိုယျတိုငျမေးကိုယျတိုငျဖွေ အငျတာဗြူးပါ..
Aung San Win (အောငျသမာဓိ စိနျရှရေတနာဆိုငျ တညျထောငျသူ/ပိုငျရှငျ)
စိန် လိုက် ရွှေ လိုက်ေ တွ အကြောင်း..
ဦးအောင် မင်္ဂလာ ပါဗျ.. မင်္ဂလာပါ.. မေးစရာလေး ရှိလို့ပါ.. အေးမေးပါဗျာ..
ခုတလော Live လွင့်ပီး စိန်တွေရွှေေ တွရောင်းေ နကြတဲ့ ကိစ္စေ လးမေးချင်လို့ပါ.. မေးပါ ဘာသိ ချင်တာလည်း..ဦးအောင် တို့အော င်သမာဓိ ကရော Live လွင့်ပီးရောင်းေ သးလား?? ရောင်းပါတယ်.. ဒီလိုရော င်းတော့ Live ရော င်းနေတုန်း ဝယ်ရင်ဈေးေ လျှာ့ပေး တာေ တွရှိ လားဗျ.. မရှိခဲ့ပါဘူး..ဒါပေမဲ့တ ခုတော့ ရှိတယ် Live ရောင်းနေ ချိန်မှာဒီဇို င်းအောက်ေ နတဲ့ေ ရွှထည် (၅၀)လော က်ကိုတော့..အရော့လ က္ခတွေ မယူတော့ဘဲ..ရွှေဘိုးနဲ့ဘဲရောင်းပေး တာရှိခဲ့ပါတယ်..
ဘာလို့အဲ လိုရောင်းနိုင်တာ ပါလဲ?? ဒီဇိုင်းအော က်နေတော့ မဟုတ်လ ည်းဖျက် ရင်ကိုယ်လ ည်းဘာမှမ ရတော့ ဘူးလေ..ကြိုက်လို့ဝယ် တဲ့သူကြတော့..သက် သာသွားတာပေါ့.. အဲဒီဖျက်မဲ့အ ထည် ရဲ့ရွှေအရ ည်သွေးေ တွကရောေ ကာင်ရဲ့လားဗျ.ပြန် ဝယ်ပေးရင်ေ ရာဈေးတူဝ ယ်ပေးရဲ့ လာ?..ကောင်းပါတယ်ေ ဈးတူဝယ်ေ ပးပါတယ်..ဆိုင်မှာက (၁၅ပဲနဲ့ ၁၆ပဲ) ရွှေရည်ကော င်းနှစ်မျိုး ဘဲထားေ ရာင်းေ တာ့.. ပြန်ရောင်းလည်း ဘာမှရှုံးစရာမ ရှိတော့ဘူးပေါ့.. ရွှေဈေး တက်ရင်မြ တ်တောင်မြတ်အုံးမှာပါ..
အောင်သမာဓိက ဘာကြောင့် ရွှေတွေစိန်တွေေ လျှာ့ဈေးမရောင်း ရတာလည်း?? ကိုယ်ပိုင်စိန်တွင်းေ ရွှတွင်းမရှိလို့ပါ.. ရှင်းပြပါအုန်းဗျ.. လျှော့ရအောင် ကိုယ်တွင်းကထွက်လို့.. အလကားရရင်ေ တာ့လျှော့ပေးလို့ ရမှာပေါ့.. ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲေ လျှာ့တယ်ဆိုရင်တော့.. တခုခုမှားနေလို့ပါ.. ရွှေဆိုင်စိန်ဆိုင်ေ တွဟာဘယ်သူမှတွင်း မရှိကြလေတော့.. လိုအပ်လာရင်ဈေး ကွက်မှာဘဲပြန်ဝယ်ရပါတယ်.. ရွှေနဲ့စိန်ဈေး ကွက်မှာတော့ေ လျှာ့ဈေးနဲ့ရောင်းတယ်ဆို တာမကြားဘူးပါဘူး.. ဒီလိုဆိုရင်ေ လျှာ့ရောင်းနေကြ တာဘာ့ကြောင့် ပါလည်း.. ဒါတော့ရောင်း တဲ့သူတွေ ဘဲမေးကြည့်ပေါ့..
Live မှာဝယ်ရင် တစ်ဝက်လျှော့.. ဆစ်ရင်ဆစ် သလိုရနေကြတယ်တစ်ကယ်ေ ရာဟုတ်ရဲ့လာ?? ဆစ်လို့ရနေတယ်ဆို တာစိန်ထည်တွေ များပါတယ်.. များသောအာြး ဖင့်ဈေးဝယ်တွေဟာစိန်နား မလည်တဲ့ သူများတော့.. မူလတန်ဘိုးဘ ယ်လောက်တန်လို့ ဘယ်လောက်လျှော့ေ ပးတယ်ဆို တာ ဈေးဝယ်သူနားမ လည်တာခက်ေ နတာပါ.. ဥပမာသိန်း (၁၀၀)တစ်ရာတ န်ကို တဝက်လျှော့သိန် (၅၀)နဲ့ရောင်းတယ်ပေါ့.. အဲဒီပစ္စည်းကိုသူများ သွားရောင်းရင်(သို့) သူ့ဆိုင် ကသိန်း (၁၀၀)နဲ့ပြန်ဝယ်ပေးရင်တော့ သိန်း (၅၀) တကယ်မြတ်ရင်ေ တာ့အဟုတ်ပေါ့.. ဒီလိုမဟု တ်ဘဲနဲ့… ပြန်ရောင်းရင်သိန်း (၅၀)အော က်လျှော့ရရင်တော့.. ခံရပီပေါ့.,
Live မှာစိန်ထည်ေ တွသိန်းထောင်ချီဝ ယ်နေကြတယ်ဆို တာဟုတ်ပါ သလား?? အောင်သမာဓိ Live မှာရော စိန်ထည်ပစွည်းတမျိုး ထည်းသိန်းေ ပါင်း(၃/၄/၅)ထောင်းရောင်ရဘူးလားဗျ?? မရောင်းရဘူး ပါဘူး..သိနေတဲ့မိတ်ေ ဆွရင်တွေကဆို င်မှာသူရော က်စဉ်ကမြင်ဘူး ပီးသားပစ္စည်း ကိုပြန်ဝယ် သွားတာ.. သိန်နှစ်ရာဘိုးဘဲ တခုတော့ ရောင်း ဘူးပါတယ်.,.
ဒီလိုဆို ရင်မင်း သမီးတွေနဲ့ Live မှာ ရောင်းနေရတဲ့ စိန်ထည်းပစ္စ ည်းတွေ သိန်(၄/၅)ထော င်းရောင်းရတာ အမှန်ရောဖြစ်ပါမလား??
ဒါတော့ရော င်းပေးတဲ့မ င်းသမီးဝယ်သူတွေနဲ့ဆိုင်ရှင်တွေ ဘဲအတိအကျ သိကြမှာပါ…
ဦးအော င်ရဲ့အမြင်လေြးေ ပာပါအုန်း..တကယ်ချမ်းသာပြီး တကယ်ဝယ်နို င်သူဘယ်သူ မဆိုပေါ့..မြေ၊ကား၊စိန်၊ေ တွကိုကိုယ်တိုင်မမြင် ရဘဲ..လက်တွေ့မကြည့် ရမမြင်ရဘဲဝ ယ်တယ်ဆိုတဲ့လူမ ရှိသလော က်ရှားပါတယ်.. ရှိရင်တော့အေ တ်ာထူးတာပါဘဲ..
Live မှာ ဝယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ စိတ်မချရ ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား??
ဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. စိန်ကျောက်ရဲ့အရည် အသွေး ကဘာလည်း.. ရွှေဘယ်လော က်သားပါလည်း.. အရည်သွေးစစ် ထားတဲ့စာရွက်ပါ ရဲ့လား.. ပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လိုပြန်ဝယ်ပေး မှာလည်း.. ဒါတွေသိ ပီးရင်နားလည်း သူကိုရောတိုင်ပင် ပြီးပီလား?? ဒါတွေပြည့်စုံရင်ဝယ် လို့ရပါတယ်…,
အောင်သမာဓိမှာ Live မှာဘယ်လောက်ထိ အများဆုံးရော င်ရဘူးလည်း?? မရောင်ရပါဘူး.. Live မှာပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကေ ကြာ်ငြာတဲ့သေ ဘာပါဘဲ.. ကြည့်တဲ့သူတွေက ကြိုက်ရင်ဆက် သွယ်လာကြ​မှ.. ဝန်ထမ်းေ တွနဲ့ဗိုက်ဘာကနေထပ်ပြ အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ပီးမှ ရောင်းရတာပါ.,
ဒီလို Live. မှာသိန်းထောင်ချီေ ရာင်းနေရတာတွေကို အခွန်ဘယ်လိုေ ဆာင်ကြပါသလည်း.. ဒါကေ တာ့အခွန်ဝန်ထ မ်းဝယ်ဆိုတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆိုင်ရှင်တွေမေးကြည့်ပေါ့..
အောင်သမာဓီရွှေ ဆိုင်ကရောအခွန်တွေ ဘယ်လိုဆောင် ပါသလဲ.. ဆိုင်ခွဲ(၄/၅)ဆို င်ဘဲရှိပေမဲ့ အထက်မြန်မာပြည် မှာတော့ အများဆုံးဆောင်နိုင်လို့ (ပထမ) ဆုရထားပါတယ်..
ဘာမျာြး ဖည့်စွက်ြေ ပာချင်ပါသေးလည်း.??
စိန်တွေရွှေတွေအကြောင်းနားမလည်ဘဲ.. လျှော့ဈေးမက်နေရင်တော့ ငါးမျှားချိတ်ဟတ်မိတဲ့ငါးလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
မှတ်ချက်= “လူအ မကုန်၊ လူကုန် မအ” စာတစ်လုံးရဲ့ ကိုယ်တိုင်မေးကိုယ်တိုင်ဖြေ အင်တာဗျူးပါ..
Aung San Win (အောင်သမာဓိ စိန်ရွှေရတနာဆိုင် တည်ထောင်သူ/ပိုင်ရှင်)
ခဈြဇနီး ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျထားသော အရသာရှိလှတဲ့ ဟငျးလြာလေး အား ဓာတျပုံရိုကျပွီး ထုတျကွှား……..
တဈစုံတဈယောကျနဲ့ အတူနခေဲ့ပီးလို့ မသနျ့တော့ပါဘူး ဆိုပွီး စိတျညဈနတေဲ့ မိနျးကလေးမြား ဖတျရနျ…မဆိုငျသူမြားမဖတျရ..
စဈသား တဈယောကျရဲ့ သမီး ဖွဈတဲ့အတှကျ ဘယျသူတှေ ဘာပွောပွော စဈသား တှကေို ခဈြတယျ ဆိုတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ………